जान्नुहोस ! बेथेको सागका स्वास्थ्यबर्दक फाइदा जसको सेवनले यस्ता रोग को गर्छ उपचार - Samachar PatiSamachar Pati
जान्नुहोस ! बेथेको सागका स्वास्थ्यबर्दक फाइदा जसको सेवनले यस्ता रोग को गर्छ उपचार
काठमाडौँ, २८ माघ । बेथेको साग थुप्रै औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । बेथेमा खनिज तत्त्वको मात्रा अमलामा भन्दा बढी हुन्छ । बेथेले शरीरमा फलामको कमी हुन दिंदैदैन। साथै, मृगौलामा पत्थरी हुन पाउँदैन। आमाशयलाई बलियो बनाउँछ । बेथेमा फलाम, फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार धेरै मात्रामा पाइन्छ। यो शुक्रवर्धक र कब्जियत भगाउन लाभकारी मानिन्छ ।
भोक नलाग्ने, खाना ढिलो पच्ने, डकार, पेट फुल्नेजस्ता समस्या हटाउन पनि बेथे लाभदायक हुन्छ । पिसाब, मूत्राशय, मृगौलासम्बन्धी रोग निको पार्न र छालासम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग प्रभावकारी मानिएको छ । बेथे उमालेको पानीले कपाल पखाल्दा जुम्राबाट मुक्ति पाइन्छ । यसो गर्दा कपाल समेत स्वस्थ बनाउँछ ।
कपालको प्राकृतिक रंग यथावत् रहन्छ। मूत्राशय, मृगौलासम्बन्धी रोग निको पार्न र छालासम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग हुन्छ ।बेथेमा फलाम, फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार धेरै मात्रामा पाइन्छ । यो शुक्रवर्धक र कब्जियत भगाउन लाभकारी मानिन्छ । कलेजोसम्बन्धी रोग, अजीर्ण, ग्यास, जुका, पत्थरी, पेट घोच्ने समस्या लगायतबाट मुक्ति मिल्छ ।
धुमपानको गहिरो लत लागेको छ ! धुमपान छाड्न चाहानु हुन्छ ! यस्ता छन् धुमपान छोड्ने तरिका
ड्राईभिङ्ग बिश्वबिद्यालय आबस्यक : सांसद कोईराला